အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
သတင်းအချက်အလက်၊ အသုံးပြုမှုဖော်ပြချက်၊ အချက်အလက်စာရင်းများ၊ pinouts၊ အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များ၊ သင်ခန်းစာများ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများ၏အဓိကအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်သင်လိုအပ်သမျှ။
Transistor၊ နတ်သမီးတစ်ပါး၊ dimmer (သို့) အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ ၀ ယ်ခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီခြင်းနှင့်၎င်းကိုမည်မျှအထိအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုသူသိသင့်သည်.
ဒါကြောင့်ငါတို့သင်တို့ကိုစွန့်ခွာသော tabs များသွားရောက်ကြည့်ရှု ဂန္အကြားဂန္.
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခု ထူထောင်လိုပါက ပျောက်ဆုံးမသွားသင့်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကိရိယာများထဲမှတစ်ခုမှာ oscilloscopes ဖြစ်သည်။ ဖြင့်…
Servo SG90- ဤလျှပ်စစ်မော်တာအသေးစားအကြောင်း သင်သိလိုသမျှ
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
Steppers သို့မဟုတ် stepper motors နှင့် servomotors ကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်မော်တာ အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။ အဲဒီအထဲမှာ…
M5Stack- ဤကုမ္ပဏီမှ သင့်အား IoT တွင် ပေးဆောင်ရမည့် အရာအားလုံး
M5Stack သည် IoT စနစ်များနှင့် အလုပ်လုပ်သော ထုတ်လုပ်သူများကြားတွင် ပို၍ အသံထွက်သည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
NE555- ဤဘက်စုံသုံး ချစ်ပ်အကြောင်း အားလုံး
555 ပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ်သည် အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် တွေ့ရမည့် အကျော်ကြားဆုံး ချစ်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကနေ လာနိုင်ပါတယ်...
Schottky diode သည် အီလက်ထရွန်းနစ် ပရောဂျက်များအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရမ်းထူးခြားတဲ့အမျိုးအစား...
Cable Jumper - အဲဒါက ဘာအတွက်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
jumper cable သို့မဟုတ် jumper cable သည် များသောအားဖြင့် စက်ရုပ်အချို့မှ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအစုံအလင်ဖြင့် လာလေ့ရှိသည်။
Ceramic capacitor: အဲဒါက ဘာလဲ။
ဤဘလော့ဂ်တွင် electrolytic capacitors အပါအဝင် အခြားသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့ကို စမ်းသပ်နိုင်ပုံကို ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်သည်။ အခု…
ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များ၊ ချစ်ပ်များ၊ မိုက်ခရိုချစ်ပ်များ၊ IC (Integrated Circuit) သို့မဟုတ် CI (Integrated Circuit) သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို သင်ခေါ်လိုသမျှသည် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
လော့ဂျစ်ဂိတ်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်အရေးကြီးပြီး စတင်လိုပါက ...
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
အပူခံငါးပိသည် အီလက်ထရွန်းနစ်လောကတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အင်တာဖေ့စ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း...
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင် toroidal transformer လည်းပါဝင်သည်၊ ထို့အပြင် ဤဒြပ်စင်အမျိုးအစားကို ကုသသောအခါတွင်လည်း ...